Food mugwaro Carboxymethyl Cellulose Sodium (CMC) - Shanghai Honest Chem. Co., Ltd
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) chiri chichena kana yellowish upfu kuti odorless, shata uye non-toxic.It ane matunhu hygroscopicity uye soluble mumvura kuumba gobvu zvokunwa. Chinhu polyanionic electrolyte uye kwete fermented.It ane zvakanaka kupisa-nokutsiga .resistance kuti munyu uye film-dzichiumbwa pfuma. 1.Prevent mapuroteni mu iine acid mukaka kubva condensing, marongero uye laminating. 2.Due ayo kujairika kumeso shuga namatidza mamiriro pashure urwa, izvozvo kuti drink inonaka uye kumeso. 3.Its zvakanaka kunyange ...
Sodium Carboxymethyl Cellulose ( CMC ) chiri chichena kana yellowish upfu kuti odorless, shata uye non-toxic.It ane matunhu hygroscopicity uye soluble mumvura kuumba gobvu zvokunwa. Chinhu polyanionic electrolyte uye kwete fermented.It ane zvakanaka kupisa-nokutsiga .resistance kuti munyu uye film-dzichiumbwa pfuma.
1.Prevent mapuroteni mu iine acid mukaka kubva condensing, marongero uye laminating.
2.Due ayo kujairika kumeso shuga namatidza mamiriro pashure urwa, izvozvo kuti drink inonaka uye kumeso.
3.Its evenness zvakanaka uye iine acid nemishonga inopa chokunwa yakanaka pakusimba
4.Effectively uvandudze Cracking kana collapsing kuti flakes wokuparadza inobudirira maatomu akafanana.
Mwero kuzvitsinhanisa (DS)
Chlorides (Sezvo Cl - ),%
Heavy simbi (sezvo Pb),%
Iron (sezvo Fe) ,%
Arsenic (sezvo Kana) ,%
Maererano mushandisi ' S chinodikanwa
4.Transportation uye Storage
Next: Industrial mugwaro Carboxymethyl Cellulose (CMC)